Ama-Akhawunti Athengisa Ubungozi Omkhulu Nase-Offshore Card Processing
Ama-Akhawunti we-Offshore Merchant kanye ne-High Risk Card Card Processing
A i-akhawunti yomthengisi oyingozi imvamisa i i-akhawunti yomthengisi waphesheya kwezilwandle. Okusho ukuthi, umuntu usebenzisa i-akhawunti yasebhange laphesheya ukucubungula amakhadi wesikweletu bese ethola imali engenayo. Ngaleyo ndlela, ungangenisa imali kwi-akhawunti yakho yebhizinisi engaphesheya. Ngaphezu kwalokho, abahlinzeki be-akhawunti yomthengisi amakhadi wesikweletu bangabhala cishe wonke umuntu futhi cishe noma iyiphi inhlangano njengebhizinisi “eliyingozi enkulu”. Ngakho-ke, izinkampani ezisebenzayo zidinga ukuthi usungule i-akhawunti yomthengisi wekhadi lesikweletu eliyingozi enkulu.
Izinkampani zokulungisa amakhadi esikweletu zenza lokhu esiteji sezicelo ngezizathu eziningi. Isibonelo, bangahlukanisa ngebhizinisi inani lesilinganiso sembuyiselo ephezulu njengengozi enkulu. Ngaphezu kwalokho, sibabonile benqaba izicelo ngoba umenzi wesicelo noma uhlobo lwebhizinisi alihlangabezani nenqubo yokubhala eqinile. Uma lokhu kunjalo kuwe, kungenza inkampani enkulu esebenza ngekhadi lesikweletu impendulo.
UkuCubungulwa Kwekhadi Lesikweletu kanye neBanternation Banking
Lapho usebenza nomhlinzeki wokulungiswa kwamakhadi wesikweletu obhekene nama-akhawunti womthengisi osengozini enkulu, cishe angavuma isicelo sakho. Ngokuvamile, lokhu kubandakanya amabhange ase-offshore kanye ne-akhawunti yomthengisi wase-offshore.
Amanani e-akhawunti yomthengisi we-Offshore Bank
Imvamisa, abathengisi abanobungozi obukhulu bazokhokha amanani aphezulu obungozi. Kodwa-ke, sithole ukuthi songa i-98% yabathengisi emananini okusebenza ngaphezulu kwalokho abhekene nakho njengamanje. Lokhu kunjalo noma ngabe zinezidingo zobungozi obuphansi, obuphakathi noma obuphakeme. Qaphela ngoba baningi abahlinzeki abazovuma ngokuzenzakalelayo abafaka izicelo ngezinkontileka eziyingozi namanani entengo emibi. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi hlola inkontileka yakho futhi ubone ukuthi ngabe kukhona yini amazinga wokunciphisa amazinga wokuthenga. Isibonelo, izindawo ezinkulu zokugcina, izivumelwano zokugibela ezinqunyelwe nezinye izinhlobo zokunciphisa ubungozi kungasiza umenzi wesicelo athole amanani amahle kakhulu.
Ingabe Ngidinga I-Akhawunti Yasebhange Ye-Offshore?
Abahlinzeki bempahla bangabhalisa ibhizinisi njengengozi enkulu ngenxa yomkhakha walo. Umnikazi angaba nesikweletu esibi. Ngaphezu kwalokho, ibhizinisi lezinye izizwe elinokuthengiselana ngaphakathi e-US lingaba lebhizinisi. Ngenye indlela, umkhiqizo noma insizakalo kungenzeka ukuthi akukho emthethweni ngokuya ngemithetho ethile yasekhaya, yombuso noma yenhlangano. Ngisho namaqhinga okuthengisa angabazekayo noma amaqhinga okuthengisa angaholela ekuphikisweni. Ngakho-ke, kumabhizinisi amaningi, i-akhawunti yomthengisi engaphesheya yiyona ndlela kuphela yokucubungula amakhadi wesikweletu online. Ukuze ube neyodwa, abathengisi abaningi badinga ukuthi ube ne-akhawunti yasebhange ngaphesheya. Lokho kusho ukusetha inkampani engasolwandle kanye ne-akhawunti yasebhange engaphesheya.
Amabhizinisi Adingayo I-Akhawunti Yomthengisi We-Offshore
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ama-akhawunti abathengisi asengozini enkulu yenzelwe amakhasino aku-inthanethi noma emakhemisi kuphela. Kodwa-ke, ngemihlahlandlela yanamuhla yokubolekwa nezidingo ze-akhawunti yezimali, imikhiqizo ethembekile namabhizinisi akwi-inthanethi “asengozini enkulu.” Ngakho-ke, adinga iprosesa ekhethekile yamakhadi esikweletu. Nazi izinhlobo zebhizinisi ezidinga kakhulu ama-akhawunti womthengisi asengozini enkulu.
Amasayithi wengxoxo ye-1-800
Amazon, Yahoo noma Google Stores
I-casino, ukugembula noma imidlalo
Hlola amasevisi wokukhipha imali
Ukuthengisa ugwayi noma ukubhema ugwayi noma imikhiqizo ye-nicotine
Izinhlamvu zemali, imali yokuqoqa noma amaqoqo okuqoqa ama-autographed
Amakhuphoni noma uhlelo lokuvuza-amaphuzu
Ukulungiswa kwesikweletu noma isikweletu & nokwelulekwa ngesikweletu
Izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo nezokuhlengikaza
Izinto zokusebenzisa izidakamizwa
I-E-Books (izinto ezibhalwe phansi)
Amathikithi abathengisa ithikithi (engavunyelwe futhi engabhalisiwe (okusho ukuthi abathengisi be-Stub Hub uhlobo)
Amasevisi okuthumela (okungewona ase-US asekelwe)
Amawebhusayithi ezemidlalo ezingokoqobo
Abadayisi belayisense baseFrance (FFL)
Umthengisi wezezimali, ukubonisana ngezimali noma amasevisi wokuguqula imali
Ukubonisana kwezezimali okungaqondile (ie Indlela Yokulondoloza Imali Ngokunciphisa Umthethosivivinywa Wakho Womfula.)
Ukuhlela kwezezimali, isu noma ukwelulekwa
"Gcina izincwadi ezicebile", izinhlelo, njll
Amathikithi aphakeme aphezulu
"Kanjani-Ukuze" uthayiphe amawebhusayithi (okusho ukuthi "Funda Kanjani-Ukwenza Imali E-intanethi")
Ama-Horoscopes, ukubhula ngezinkanyezi noma izinsizakalo zengqondo (okungukuthi ababikezeli benhlanhla)
Imikhiqizo noma amasevisi
Ama-hypnotist noma ukuzivocavoca
Abadayisi bamazwe ngamazwe (okungewona asekelwe e-US)
Ukuthunyelwa kwamanye amazwe, imithwalo noma ukungenisa / ukuthekelisa
Amafemu okutshala izimali
Isu lokutshalwa kwezimali nezincwadi zokutshala imali
Izinkonzo zokudlulisela ummeli
Ukuthengiswa kweMagazini nokubhaliselwe
Izinhlangano zobulungu (ngaphezulu kwezinyanga ze-12)
Abadayisi efayeleni lomthengisi eliphelile (uhlu lwe-TMF)
Ukumaketha kwamaningi amaningi (MLM)
Umculo, i-movie, isofthiwe yokulandwayo noma ukulayishwa (isib. Umculo oqoshiwe, amabhayisikobho noma isofthiwe (ie ihhovisi le-Microsoft))
Off-shore corp. izinsiza zokusungula
Amakhadi we-debit akhokhelwayo
Amasevisi we-telemarketing angenamkhawulo noma aphumayo
Izikhwama zempendulo, amawashi, izikhwama, izibuko njll? (knock-offs)
Ukuzivikela, i-pepper spray, i-mace, njll.
Izingosi zokuxhumana nabantu? Facebook, Twitter, MySpace njll?
Ukubikezela ezemidlalo noma ukufaka / ukubheja
Ukucubungula iqembu lesithathu, ukuhweba abathengisi (ie, inqubo yokukhokha, abadayisi abaqashisayo beholide)
Ama-share-time noma amasheya okukhangisa isikhathi
Izinsizakalo zokuhamba nezokuvakasha
Ukuqashiswa kweholide (ngaphandle uma impahla ingumthengisi)
Ukuthengiswa kwe-Vitamin kanye ne-Supplement? amaphilisi okudla, amaphilisi omuthi wokugqoka, izithako zezempilo, ikhemisi
Izinkampani zemvume ezinwetshiwe
Izikhali zanoma yiluphi uhlobo: izibhamu, imimese, izibhamu ezihlabayo, noma i-ammo. Kubandakanya noma yiziphi izingxenye zezikhali (okusho ama-butts, ama-trigger, ama magazini, njll.).
Ngokuvamile, uma unayo i-akhawunti yasebhange ye-offshore kanye ne-akhawunti yomthengisi, udinga ukulondoloza Intela ukuthobela. Isibonelo, abantu e-US, UK, Canada, Australia, nakwamanye amazwe amaningi bakhokha intela yomhlaba wonke. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ugcina izeluleko zentela ezizwakalayo kwingcweti yentela enelayisense.
Ungayisetha kanjani i-Akhawunti Yomthengisi Oyingozi Oyingozi
Ngemuva kokufunda lokhu, ngabe ucabanga ukuthi i-akhawunti yomthengisi oyingozi oyingozi ulungile kuwe? Uma kunjalo, sicela usebenzise izinombolo zocingo noma ifomu lokubonisana kuleli khasi. Uma wenza, ungakhuluma nochwepheshe ongakunika eminye imininingwane.